Ahoana no hahafantarana raha ny iPhone na tany am-boalohany na tsy voafitaka 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Azo atao ny mahafantatra raha ny iPhone na tany am-boalohany na sandoka tamin'ny fomba sasany. Ny tompony dia afaka manamarina ny IMEI (International Mobile Equipment Identification) na mijery ny laharana serial ao amin'ny tranokala Apple. Ho fanampin'izay, misy lafiny ara-batana manampy amin'ny famantarana raha tena izy ilay fitaovana na replika. Anisan'izany ny efijery, ny tapakila ary ny sary famantarana.
Ity misy fomba hilazana raha tena izy ny iPhone na tsia ary aza adalana.
Amin'ny alàlan'ny IMEI sy ny laharana serial
Ny IMEI (fanafohezana amin'ny teny anglisy ho an'ny Ny mombamomba ny ekipa finday iraisam-pirenena) dia laharana famantarana miavaka isaky ny telefaona finday. Toy ny hoe antontan-taratasim-panamarinana misy valiny iraisam-pirenena. Tsy misy fitaovana hafa eto amin'izao tontolo izao hanana fitoviana.
Ny laharana serial dia kaody iray misy litera sy isa izay manangona vaovao momba ilay fitaovana, toy ny toerana sy ny daty nanamboarana, modely, sns. Amin'ny ankapobeny dia hita amin'ny toerana mitovy amin'ny IMEI izy io.
Amin'ny iPhone tany am-boalohany, hita ao anaty boaty, amin'ny vatan'ny finday avo lenta, ary amin'ny alàlan'ny rafitra fandidiana io angona io.
Amin'ny tranga iPhone
Ny IMEI sy ny laharana laharana dia eo akaikin'ny kaody bara amin'ny boatin'ny fitaovana. Mandrosoa, hosoratana IMEI na IMEI / MEID (1) ary (S) Nomery Serial (2), narahin'ny filaharana isa na alphanumerika. Ireo tadiny ireo dia tsy maintsy hitovy amin'ireo aseho ao amin'ny fangatahana etsy ambany.
Amin'ny alàlan'ny rafitra
Raha te hahalala ny IMEI amin'ny alàlan'ny rafitra dia araho fotsiny ilay lalana Fikirana → ankapobeny → About. Kitiho ny efijery mandra-pahitanao ilay zavatra IMEI / MEID mi Nomeraon-tandahatra.
Amin'ny iPhone ihany
Ny iPhone tsirairay avy dia manana ny laharana IMEI voasoratra ao amin'ilay fitaovana. Miovaova arakaraka ny modely ny toerana. Amin'ny ankabeazan'izy ireo dia misy amin'ny takelaka SIM izy io.
Ao amin'ny iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (andiany voalohany), iPhone 1s, iPhone 5c, ary iPhone 5, ny atiny dia voarakitra ao ambadiky ny smartphone. Hita eo ambanin'ilay teny ihany io. iPhone.
Apple ID volo
Azonao atao ny miditra amin'ny tranokala Apple ID amin'ny alàlan'ny Internet browser. Ampidiro fotsiny ny antsipirian'ny fidiranao ary avy eo midina mankany amin'ilay faritra fitaovana. Tsindrio ny sarin'ny fitaovana tianao hahitana ny IMEI ary hisokatra ny varavarankely.
Ho fanampin'ny isa dia aseho ny fampahalalana toy ny maodely, kinova ary laharana serial.
Amin'ny alàlan'ny keypad finday
Fomba iray hafa hahitana ny IMEI dia amin'ny fanoratana * # iraika amby roapolo # amin'ny kitendry fitaovana. Hiseho eo amin'ny efijery ny fampahalalana.
Amin'ny alàlan'ny serivisy Hamarino ny fandrakofana (Hamarino ny fandrakofana)
Apple dia manana tranokala ahafahan'ny mpampiasa manamarina ny satan'ny fiantohana Apple sy ny fahazoana mividy fandrakofana fanampiny AppleCare. Mba hanaovana izany dia mila miditra ny laharana serial an'ny fitaovana ianao.
Raha tsy tena izy ny iPhone dia tsy ho fantatra ny kaody. Raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia azo atao ny mahafantatra raha mitombina ny datin'ny fividianana ary raha mavitrika ny fanohanana ara-teknika sy ny fanamboarana ary ny fandrakofana.
Rafitra miasa sy fampiharana napetraka
Tsy miasa afa-tsy amin'ny rafitra iOS ny iPhones rehetra. Izany hoe, raha velominao ilay fitaovana ary Android izy io, dia azo antoka fa sandoka ilay fitaovana. Na izany aza, matetika ny mpisandoka dia mampiasa fitaovana manahaka ny fisehoan'ny lozisialy Apple.
Amin'ny tranga toa izany, ilaina ny manamarina raha manana fampiharana manokana ny telefaona, toy ny App Store, ny browser browser, ny Siri assistante, ankoatry ny hafa. Mba hialana amin'ny fisalasalana, azonao atao ny manamarina ny kinova iOS ao amin'ny sehatra.
Mba hanaovana izany dia araho ny lalana Fikirana → ankapobeny → Fanavaozana ny lozisialy. Eo, ny mpampiasa dia miatrika ny kinova sy ny mombamomba azy, toy ny fitaovana sy ny vaovao mifanentana aminy.
Amin'ny alàlan'ny efijery
Ity torohevitra ity dia manan-kery indrindra ho an'ireo izay mividy iPhone faharoa. Indraindray ny mpampiasa voalohany dia afaka manimba ny efijery ary manolo azy amin'ny tsy Apple na voamarin'ny orinasa.
Fa inona ny olana amin'ny fampiasana a Monitor iza no tsy original? "Ny fampisehoana tsy Apple dia mety hiteraka olana amin'ny fifanarahana sy ny fahombiazana", hoy ny fanazavan'ilay mpanamboatra. Mety hidika ho lesoka ao amin'ny multi-mikasika, fanjifana bateria avo kokoa, fikasihana an-tsitrapo, ankoatry ny fihemorana hafa.
Avy amin'ny iPhone 11 dia azo atao ny manamarina ny niandohana tamin'ny alàlan'ny rafitra. Mba hanaovana izany dia araho fotsiny ny lalana Fikirana → ankapobeny → About.
Raha hitanao Hafatra lehibe eo amin'ny efijery. Tsy azo atao ny manamarina fa manana efijery Apple tany am-boalohany ity iPhone ity, mety tsy nampiharina ny fanoloana tany am-boalohany.
Lafiny ara-batana hafa
Ny endri-javatra sasany amin'ny vatan'ilay fitaovana dia afaka manondro raha tena izy ilay iPhone na tsia. Ka raha mieritreritra ny hividy fitaovana Apple ianao dia zava-dehibe ny fahafantaranao antsipirihany sasany.
Hatramin'ny iPhone 7 dia tsy nampiasa ny lohan-tsofina nentim-paharazana tamin'ny finday avo lenta nantsoina hoe P2 i Apple. Noho izany, tsy azo atao ny mampiasa afa-tsy ireo izay manana mpampitohy karazana varatra, ilay iray ihany izay mamela ny famerenana ny smartphone. Na modely tsy misy tariby, mifandray amin'ny Bluetooth.
Ka raha nividy iPhone vaovao ianao izay manana jack headphone iraisana dia tsy tena izy ilay fitaovana.
IPhones rehetra dia manana ny sary famantarana Apple malaza mijanona ao ambadiky ny fitaovana. Amin'ny voalohany, rehefa mihetsiketsika ny kisary ny mpampiasa, dia tsy mahatsikaritra fahasamihafana na fanamaivanana mifandraika amin'ny atiny izy ireo.
Na dia manam-pahaizana manokana aza izy, dia sarotra ho an'ireo mpamokatra replika sy sandoka ny mamokatra io karazana fahatsapana io. Noho izany, mazàna ny banga dia misy elanelana misy eo ambonin'ny sy ny sarin'ny Apple.
Araho maso ny antsipiriany bebe kokoa
Miaraka amin'ilay fitaovana eny an-tànana dia azo atao ny mampitaha ny fisehoany amin'ny famaritana natao tao amin'ny tranokala Apple. Zahao ny antsipiriany toy ny loko azo alaina ho an'io maodely io, ny toeran'ny bokotra, ny fakan-tsary ary ny flashes, ankoatry ny hafa.
Ny orinasa aza dia mamaritra ny karazana famaranana. Toy ny "vera matte textured, miaraka amina vy tsy misy vy manodidina ny endriny," raha ny iPhone 11 Pro Max.
Jereo ihany koa ny fahafaha-manao misy ny maodely tsirairay. Raha manolotra iPhone X 128GB ianao dia mitandrema, rehefa dinihina tokoa, ny andian-dahatsoratra dia manana safidy ihany amin'ny 64GB na 256GB.
Inona no tsy ananan'ny iPhone
Ny IPhones dia tsy manana fampiasa mahazatra amin'ny finday avo lenta avy amin'ny marika hafa. Ireo fitaovana Apple dia tsy manana fahitalavitra niomerika na antennas mazava ho azy. Izy ireo koa dia tsy manana vatasarihana fanaovana karatra fahatsiarovana na sim-indroa.
Fiheverana: ny maodely toa ny iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR na taty aoriana dia manana fiasa simulasi indroa. Na eo aza ny toerana tokana amina puce iray fotsiny dia karatra nano-SIM sy karatra e-SIM no ampiasaina, izay kinova nomerika an'ny chip.
Mitandrema amin'ny vidiny ambany dia ambany
Toa somary miharihary ihany, fa rehefa tsara loatra ny tolotra ka tsy marina, dia ilaina ny mampiahiahy. Raha mahita iPhone amin'ny vidiny ambany dia ambany ianao amin'ny magazay manokana raha ampitahaina amin'ny orinasa hafa atokisana, dia mampiahiahy.
Tsara ny manamarika fa ny fitaovana sasany tany am-boalohany dia amidin'ny orinasa matotra amin'ny vidiny mora kokoa satria aseho na havaozina, antsoina koa hoe nohavaozina. Amin'ny ankapobeny, ny fivarotana dia manondro ny anton'ny fihenan'ny sandany.
IPhone fampisehoana, araka ny anarany, dia iray izay efa naseho nandritra ny fotoana kelikely. Izany hoe, tsy voaro tamin'ny ora fanombohana izany ary mety misy marika vitsivitsy noho ny fifandraisany amin'ny mpanjifa na ny mpiasa.
Ny fitaovana reconditioned dia iray, noho ny olana sasany, naverina tamin'ny mpamokatra ary nosoloina ny faritra misy ny olana. Ny bateria sy ny aoriana koa dia miova. Amin'ny ankapobeny dia amidy hatramin'ny 15% izy ireo ary manana antoka mitovy amin'ny finday finday vaovao.
Ahoana no ahafantarana raha miverina miverina ny iPhone-ko
Azo atao ny mahafantatra amin'ny alalany laharana modely. Mba hanaovana izany, mankanesa Fikirana → Momba. Raha manomboka amin'ny litera ny isa maodely Metro, midika izany fa vaovao izy io. Raha manomboka amin'ny taratasy ianao F, Nohavaozina.
Raha sendra mahita ilay taratasy ianao P, midika izany fa namboarina manokana. Ny taratasy avaratra dia manondro fa nomen'i Apple hanoloana fitaovana diso.